ललितपुरका वडाको चेतावनी : गाउँ गएकाहरु नफर्कनू, थाहा पाए घर नै सिल गर्छौँ ! – Koshidaily
मुख्य पृष्ठसमाचारललितपुरका वडाको चेतावनी : गाउँ गएकाहरु नफर्कनू, थाहा पाए घर नै सिल गर्छौँ !
ललितपुरका वडाको चेतावनी : गाउँ गएकाहरु नफर्कनू, थाहा पाए घर नै सिल गर्छौँ !
२६ बैशाख २०७७, शुक्रबार ०६:२० प्रकाशित
ललितपुर : साता दिन पहिला बिराटनगरबाट एक महिला ललितपुर महानगरपालिकाको धोबीघाट ३ स्थित आफ्नै भाडाको घरमा बस्न आएकी थिइन् ।तर बाहिरबाट आएकाहरुबाट कोरोनाको जोखिम हुनसक्ने भन्दै उनलाइ त्यहाँ बस्न दिइएन । ३ वडाका अध्यक्ष श्रीगोपाल महर्जनका अनुसार उनी बस्दैआएको घरमा एक जना वृद्दा बस्छिन । उनले पनि ती महिलालाई घरमा बस्न स्वीकृत नदिएपछि त्यहाँबाट निस्किएकी हुन । महर्जनले भने ‘खै काभ्रेतिर जान्छु भन्थिन, कता गइन थाहा भएन।’
महर्जनका अनुसार यसै साता उनकै वडामा अर्की महिला पोखराबाट आइन । अन्य सवारीमा आउने संभावना नदेखिकाले उनी पोखराबाट एम्बुलेन्स लिएर आएकी हुन । तर वरपरकाले वडामा गुनासो गरेपछी उनलाई घरैमा क्वारेन्टाइनमा बस्न भनिएको उनले बताए । तर यसरी बाहिरबाट आउनेहरुका कारण त्रास बढेको छ।’ उनलाई जे चाहिन्छ वडामा खबर गर्न भनिएको छ । घर बाहिर निस्कन बन्चित गरीएको उनले बताए ।
ललितपुरमा बाहिरबाट भित्रिनेहरु क्रमश बढेका कारण स्थानीय सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुन थालेको छ । वडा ९ ले पनि धम्किपुर्ण शैलीमा बाहिरबाट आउनेहरुलाई बस्न नदिने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा सुरक्षाका कारण भाडामा बस्नेहरुलाई स्थिति सामान्य नभइन्जेल नफर्किन आग्रह गरिएको छ । घरधनीले बहालमा बस्नेलाइ फोनमार्फत भन्नुपर्ने पनि जनाइएको छ । जवर्जस्ती फर्किएको खण्डमा टोलसुधार समितिको निगरानीमा १४ दिनसम्म पुरै घर ुलकु गरिने उल्लेख छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमराज भुसालका अनुसार स्थानीय सरकारले त्यसरी घरबाट निकाल्ने र बस्नै नदिने काम उचित नभएको बताए । उनले भने ‘माथिल्लो तहको सरकारले पनि हेर्छ । समस्यामा परेका नागरिकलाई पीडामा पार्न हुदैन ।’ बरु सबैको आवस्यक परीक्षण गरेर सचेत गराउन आवस्यक लागेको बताए ।
ललितपुर महानगरपालिकामा ७० हजार घरधुरी छ्न। कम्तीमा ५ प्रतिसत मात्र भाडामा नलगाएको देखिएको ३ वडाका अध्यक्ष महर्जनको भनाई छ । १३ वडाका अध्यक्ष गणेश केसीले पनि केही समय पहिला पुर्वबाट आएको गाडी थानकोटमा रोक्दा केही यात्रु भागेर उनको वडामा आएको बताए ।